Ma doonaysaa in lagu shido oo aan ka kaaftoomi doono?
Maamul lagu shido la phone New-Technoloy From Baseboard Empire
"Marka ka baxsan cimiladu waa haadaamaha, guriga waa sidaas raaxo dab sidaas farxad." Tani waa markii ugu of sano marka aan waqti badan ku qaataan gudaha, waqti dheeraad ah gudaha guryaheena, waxaana rabnaa in aan helo habab si ay u diiran oo raaxo . Markii aan maqli karo dabaysha qabow iyo arko barafka ka baxsan is qarxiyaan, waxaan ...
Remote xakamayso shido by phone smart
Hey! Waa Imaanshaha New! Si aad u fog xakamayso lagu shido si fudud by phone smart! Shido Empire shido smart waa qalab dhow gacanta ku saleysan Bluetooth 4.0 Low Energy Technology. Waxaad kala soo bixi kartaa Baseboard APP si loo xakameeyo qalabka marayo phone smart. Waxaa ku jira qaybood: awoodda Baseboard b ...